आज माघ २८ गरे सोमबार, तपाईको दिन कस्तो रहला ? हेर्नुहोस् आजको राशिफल !
आजको दिन तपाईको मिश्रित फलदायी हुने देखिन्छ। आज तपाई अस्वस्थता एवं व्यग्रता अनुभव गर्नु हुने देखिन्छ भने आज तपाईलाई स्वास्थ्यले साथ नदिने देखिन्छ। आज तपाईको केहि हदसम्म क्रोध बढेर जाने दिन परेको छ। तर आज तपाईको सम्पूर्ण कार्य भने निर्धारित समयमानै सम्पन्न हुनेछ।
आजको दिन तपाईले सावधानीपूर्वक बिताउनु पर्ने देखिन्छ। हरेक निर्णय लिनु भन्दा अगाडी धेरैनै सोचनु पर्ला। आज कुनै पनि प्रकारको नयाँ कार्य थालनी गर्न उचित देखिँदैन। शुभचिन्तकसमेत प्रतिपक्षीको प्रभावमा आउन सक्ने देखिन्छ भने आज तपाईलाई आर्थिक समस्याले पनि सताउने दिन परेको छ।
आज तपाईको स्रोतसाधन जुट्नाले दिगो फाइदा हुने काम प्रारम्भ हुने दिन परेको छ भने आज तपाईको कानुनी कार्य पनि सफल हुन सक्ला। टाढाको यात्रा व्यवस्थित हुन सक्ला। आज अध्ययनमा पनि प्रगति हुनेछ। आज मीठो भोजन प्राप्त हुन सक्ला। आज सामाजिक रुपमा सम्मान र प्रसिद्धि बढेर जाने देखिन्छ।
आज प्रयत्न गर्दा विभिन्न अवसर प्राप्त हुनेछन् र मनग्गे फाइदा उठाउन सफल हुने दिन परेको छ। आज प्रेम सम्बन्ध पनि धेरै सुमधुर हुने देखिन्छ। आज तपाईको परिवारमा हर्षोल्लासको वातावरण पनि हुने देखिन्छ। धेरै समय देखि टाढा भएका मित्रसँग भेट हुने दिन परेको छ। आज आर्थिक रुपमा दिन धेरै शुभ हुनेछ।
आजको दिन तपाईको धेरै राम्रो बित्न सक्ला भने आज तपाई अधिक कल्पनाशील रहनु हुनेछ। आज तपाईको विवाद तथा मुद्दाहरूमा आफ्नो पक्ष बलियो भएर जान सक्ला। मित्रहरू साथीहरूसँग मिलेर व्यवसायमा धेरै लाभ उठाउन सफल हुन सक्नु हुने देकिन्छ। आज तपाई धार्मिक कार्य साथै दानका कार्यमा सक्रिय हुनुहुनेछ।
आजको दिन तपाईको लागि खासै शुभ नहुने देखिन्छ भने आज तपाईको यात्रा पनि असफल हुने देखिन्छ। विशेष गरेर आज तपाई सवारी देखि सावधान रहनु होला। परिस्थितिअनुसार निर्णय लिन नसक्दा काम दोहोर्याउनुपर्ने अवस्था आउन सक्ला। आज घरायसी आवश्यकता बढ्नाले अर्थ अभाव देखा पर्न सक्ला।
आज तपाईको स्रोतसाधन जुट्नाले दिगो फाइदा हुने काम प्रारम्भ हुने देखिन्छ। प्रयत्न गर्दा विभिन्न अवसर प्राप्त हुनेछन् र मनग्गे फाइदा उठाउन सफल भइन सकिएका। विदेश बाट सुसमाचार आउनेछ। व्यावहारिक सन्दर्भको कारण यात्रा हुने सक्ला। शारीरिक र मानसिक स्वास्थ्य पनि राम्रै रहनेछ।
आज तपाईको साधारण लाभ हुने दिन परेको छ। आज तपाईले व्यर्थ खर्च माथि भने रोक लगाउनु पर्ने देखिन्छ। परिवारका सदस्यहरू बीचको सम्बन्ध भने केहि हद सम्म बिग्रिन सक्ला। नकारात्मक मानसिकता हटाउनु पर्ने देखिन्छ। अनैतिक प्रवृत्ति देखि टाढा रहनु पर्ने देखिन्छ। विद्यार्थीहरूलाई भने अध्ययनमा सफलता मिल्न सक्ला।
आज तपाईले शारीरिक तथा मानसिक स्वस्थ्यको धेरै ध्यान दिनु पर्ने दिन परेको छ। तर आज तपाईको निर्धारित कार्य भने समयमानै सम्पन्न हुने देखिन्छ। आज तपाईको धार्मिक यात्राको सम्भावना रहेको छ। आज तपाईलाई प्रेम जीवन धेरै शुखद हुने देखिन्छ। आज तपाईको व्यवहार सामान्य रहनाले दिन सुखद हुने देखिन्छ।
आज तपाईले दिन सावधानीपूर्वक बिताउनु पर्ने देखिन्छ। आज तपाईको व्यावसायिक कार्यमा सरकारी हस्तक्षेप बढ्न सक्ला। धार्मिक, सामाजिक बढ्ने देखिन्छ भने आज तपाईको खर्च पनि बढेर जाने देखिन्छ। आज तपाईको कार्य सम्पन्न गर्नको लागि अधिक परिश्रम गर्नु पर्ने देखिन्छ। मानसिक व्याकुलता बढ्न सक्ला।
आज तपाईको चिताएको काम सम्पादन हुने दिन परेको छ। आम्दानीका स्रोत बढ्नुका साथै दिगो फाइदा हुने काममा सम्झौता गर्ने समय आउन सक्ला। प्रतिष्ठा सामाजिक क्षेत्र मा वृद्धि हुनेछ। गरिएका कर्मको छोटो समयमै उचित प्रतिफल दिलाउन सक्ला भने आज तपाईको स्वास्थ्य पनिं राम्रो हुनेछ।
आजको दिन तपाइको धेरै शुभ फलदायी हुने देखिन्छ। उच्च अधिकारीहरूको कृपादृष्टिको कारण तपाईको जागिरमा सबै काम एस् सम्पन्न हुन सक्ला। आज तपाईलाई लक्ष्मीको अनुग्रह पनि मिल्न सक्ला। यात्रा पनि सफल हुने आजको दिनमा तपाईलाई सरकारी कार्यमा पनि लाभ मिल्नेछ। मान-सम्मान तथा पदोन्नति पनि मिल्न सक्ला।
प्रकाशित : आइतबार, माघ २७, २०७५१४:३६
भोलि माघ २८ गरे सोमबार, तपाईको दिन कस्तो रहला ? हेर्नुहोस् भोलिको राशिफल !